EthioTube: Interview with Oromo Recording Artist Nigusuu Taamiraat on #OromoProtests
Posted: Hagayya/August 4, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (3)
Credits/Tags: EthioTube, Featured, Nigusuu Taamiraat, OromoProtests
Hammaallee baratoota kuma 10 ol wayyaneen dararamaa jiru. Oromoon kana booda horii biyyaa ambaatti hiriira bawuuf baasu kana (poosterii, transpoortii, mana bultii)walitti qabee waraana bilisummaa oromoo ijaaruuf gumaachuu qaba.
Obamanis rakkoo keessaan ofii keessanii hiikkadhaa jedhee jira. Dhugaa qaba!
Oromoo fi habasha malee sabni biraa darara mootummaa nurraa dhoowwaa jedhee kan DCti hiriira bawuu argee hinbeeku. Kun dhaabachuu qaba. sabni falastin xiqooto boolla qofforte israeli fi US dhiiga boochisaa jirti. Oromoonis biyyaa abbaa isatiif wannti du’a of hinqopheessineef hinjiru.
Kanaaf hoogantoni ABO hammas dirqama lammummaa ijaa fudhataniif harka lafa jalaatiin saba kana hatatamaan leenjisanii hidhachiisuutu irraa egama.
Nuti 40 million yoo dhumne sabni biraa lafa baga nuudhiisanii dhuman jedhee gammada malee kan itti dhagayamu tokko hijiru.
Kanaaf namni abdii biiyyoonni alaa kun nugargaru jedhee of keessa kaaye sammuu isaa keessaa duguugee balleesee waan qabu qabsoo hidhannoof gumaachee saboota akka keenya wayyanneen itti roorrifte faana yoo lolatti bobba’e gabrummaa keessaa dafee baya jedheen amana.
Oromoo fi habasha malee sabni biraa darara mootummaa nurraa dhoowwaa jedhee kan DCti hiriira bawuu argee hinbeeku. Kun dhaabachuu qaba. sabni falasxiin xiqoo boolla qoffortee israeli fi US dhiiga boochisaa jirti. Oromoonis biyyaa abbaa isatiif wannti du’a of hinqopheessineef hinjiru.
Kanaaf hoogantoni ABO hammas dirqama lammummaa ijaa fudhataniif harka lafa jalaatiin saba kana leenjisanii hidhachiisuutu irraa egama.
akkami jirta Abbaa Boora, yaada kana namoon baayyeen akka birraatti hubbachuu mallu anaaf garuu naaf ta’ee jira, sababan isaas: waan hedduun qophii kanaf maallaqa hedduun itti baheera. namoon hedduun biyyaa garagaraa irraa walti ba’uun baassi hedduu baassanniru. dhugaa dhumatti uttuu bu’aan isaa argamee silaa gaariidha. amaan booda namnuu waan isa irraa eegamu gochuu qaba. Qabsoon keenya Qawwee duwaan furmaata ni argata siyyaasa keenyaa fi humna keenya wal simmachiissuun fininsuu qabna.